Tromsø: Wiil soomaali ah oo maxkamad loosoo taagayo dil uu ugaystay wiil kale oo soomaali ah 14 sano kahor - NorSom News
Tromsø: Wiil soomaali ah oo maxkamad loosoo taagayo dil uu ugaystay wiil kale oo soomaali ah 14 sano kahor
Waxaa maalinta Talaadada ah ee nagu soo aadan ka bilaabanayso maxkamad-goboleedka Hålogaland lagmannsrett, dhagaysiga dacwada Malik Yusuf oo loo haysto fal dil ah oo uu u gaystay marxuum kale oo soomaali oo lagu magacaabi jirey Ali Ahmed Abdi, sanadkii 2001. Dilkan ayaa 14kii bishii November 2001 ka dhacay Fasal kamid ah iskuulka Nordreisa oo ay marxuumka dhintay iyo Malik Yusufba wada dhigan jireen, waxayna sidoo kale wada degenaayeen hal guri. Malik ayaa sadex jeer toori dhabarka ka galiyay Ali Ahmed Abdi , taas oo uu markii danbe u geeriyooday. Marka uu falkan dhacayay waxaa fasalka ku jiray labadooda oo kali ah, kadib markii ay codsadeen in fasalka loo baneeyo si ay si gaar ugu wada hadlaan.
Malik oo markaa da’diisu ahayd 16 sano ayaa sheegay inuu isdifaac ku jiray marka uu falkan gaysanayay, kadib markii uu muran dhexmaray isaga iyo Ali ahmed. Waxa uuna intaas ku daray inuu arimo qabiil darteed noloshiisa uga cabsanayay marxuumka uu dilay oo da’ ahaan ka weynaa ku dhawaad labo sano. Sanadkii 2002 dhexdiisa ayay maxkamada darajada koowaad ee gobalkaas aqbashay is difaacii Malik, isla markaana ay ka fasaxday xabsiga. Laakiin dacwad oogayaasha dowlada ayaa ka biyo diiday go aanka maxkamada, isla markaana qaatay rafcaan ay ku codsanayaan in la siiyo fursad iyo waqti ku filan, si ay dhacdadan si fiican u baaraan. November 2002, Maalmo ka kahor inta ay maxkamadu guda galin dhagaysiga racfaanka dacwad oogayaasha dowlada, ayuu Malik ka baxsaday meel ay barnevernku dajiyeen, isaga oo markaas da,diisu ahayd 17 sano, isla markaana waxa uu ka baxsaday wadanka. Booliska Norwey iyo kuwa Interpol ayaa mudo 13 sano ah ku daba jiray, iyaga oo ka raadinayay dhamaan wadamada Yurub iyo kuwo kale ee caalamka. Boolisk ingiriiska ayaa bishii Febraayo ee sanadkan ku qabtay magaalada Bolton ee wadankaas, isaga oo wato magac iyo aqoonsi kale oo uu samaystay, waxa ayna usoo gudbiyeen booliska Norwey.
Qareenka dowlada Torstein Hevnskjel oo ah kan dacwada kusoo oogaya Malik ayaa u sheegay NTB in ay hayaan sharaxaadii ay dhacdan ka bixiyeen dadkii goob jooga ahaa xiligaas uu falka dhacay wax yar kadib. Wuxuu kaloo sheegay inay hayaan documentiyadii laga sameeyay baaritaanka dhacdadan iyo cadeymihii kale laga qaaday goobta uu falkan ka dhacday. Wey adkaan doontaa in eedaysanuhu iyo markhaatiyaashii kale ay xasuustaan dhamaan warbixinadii hore, balse waxaan u akhri doonaa sharaxaadii la dhiibay xiligaas.
Qareenkan dacwad oogaha ah ayaa sidoo kale sheegay inaysan wali go aan ka gaarin in dacwada loo haysto Malik Yusuf oo hada 31 sano jir ah lagu soo daro qodob kale oo ah in uu wadanka ka baxsaday. Dhagaysiga racfaanka dacwad oogayaasha dowlada ayaa socon doono mudo afar maalmood ah.
Xigasho: NRK iyo Nordlys
Previous articleSoomaaligii ugu horeeyay oo darawal buss ka noqday magaalada Hamarfest
Next articleMalik Yusuf: waxaan ka cabsi qabay in aano qabiil darteed la iigu dilo Norwey